Otu esi ehichapụ akwụkwọ na iBooks na iPhone na iPad | Esi m mac
Egburu | | Ngwa ndị ọzọ maka Mac, Nkuzi
Dị ka ọtụtụ n'ime gị maraworị n'ihi na ị na-eji ya mgbe mgbe, ngwa ahụ IBooks Ọ bara ezigbo uru idobe akwụkwọ na faịlụ pdf n'otu ebe na nke gị iPhone ma ọ bụ iPad. Site iBooks ngwa, anyị nwere ike ịga na iBooks Store na-achọpụta na ịzụta a otutu iche iche aha, ma ndị kasị ugbu a na oké ochie. Ma otu n'ime nsogbu na ọtụtụ ndị ọrụ na-eche ihu bụ ohere nchekwa nke ngwaọrụ ha, nke nwere ike jupụta ngwa ngwa ma ya mere, ọ ga-ekwe omume na n'oge ahụ ngwọta kacha mma bụ hichapụ akwụkwọ na anyị agụworị. Iji mee nke a, anyị ga - agbaso usoro ndị a.
Nke mbu, ihe ezi uche di na ihe doro anya, mepee ngwa IBooks na iPhone ma ọ bụ iPad anyị. Anyị ga-ahọrọ taabụ "Akwụkwọ m", na akụkụ aka ekpe ala, wee pịa "Họrọ", n'akụkụ aka nri elu.
Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ịhọrọ akwụkwọ niile na / ma ọ bụ nke pdf's na anyị chọrọ ihichapụ na ngwaọrụ anyị. Iji mee nke a, na-emetụ ha aka n’otu n’otu. Mgbe ịmechara, pịa "Hichapụ" n'elu aka ekpe nke ihuenyo ma kwado na menu ga-apụta.
Ma nke ahụ bụ ya. Na a nnọọ mfe na ngwa ngwa ụzọ ruo mgbe ị na-ewepụ akwụkwọ na ị chọrọ si IBooks i meela ohere maka ndị ọhụrụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ihichapụ akwụkwọ ị zụtara na Booklọ Ahịa iBooks ma emesịa ịchọrọ ịgbakwunye ya, gaa na mpaghara "Zụrụ" na ụlọ ahịa ahụ wee pịa Cloud ị ga-ahụ n'akụkụ ya iji budata ya ọzọ.
Cheta na nkebi anyi Nkuzi Have nwere ngwongwo dị iche iche na aghụghọ dị iche iche maka ngwaọrụ Apple, akụrụngwa na ọrụ gị niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa ndị ọzọ maka Mac » Etu esi ehichapu akwukwo na iBooks na iPhone na iPad gi
Enweghị m ike ime ya, akụkọ mkpochapụ apụtaghị
Ọtụtụ akwụkwọ m zụtara n'efu na-apụta na ndepụta ndị a zụrụ ma ha abaghị uru, ha na-aga n'ihu na-aga n'ụzọ. Ana m ehichapụ ọtụtụ n'ime ha ma a ga-ahụ ha n'ọbá akwụkwọ (anaghịzi adị ala, kama ka "a ga-eweda ha ala")
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe ị ga-achọ bụ, ọ bụghị naanị ihichapụ ha na ngwaọrụ ahụ, kamakwa na ndepụta niile
Ọ na-eme m ka m chọọ ịhụ ọtụtụ akwụkwọ nke na anaghịzi m achọ ịgụ ma edepụta ya ebe ahụ
Jiri Applelizados merie kaadị iTunes na € 100